‘मेला’को गीत रिलिज, पवित्रासँग गजितको ठुम्का | Jukson
‘मेला’को गीत रिलिज, पवित्रासँग गजितको ठुम्का
पोखरा, १९ भदौँ
सलोन बस्नेत, अशिष्मा नकर्मी र आमेश भण्डारीको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म ‘मेला’ को पहिलो गीत सार्वजनिक भएको छ । आइतवार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बिच फिल्मको ‘परिचय पाउँ’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको हो । गीतसँगै फिल्मको रिलिज डेट पनि घोषणा गरिएको छ । यो फिल्म कात्तिक २४ गतेबाट देशव्यापी प्रदर्शनमा आउने निर्देशक बसन्त निरौलाले जानकारी दिए ।
’परिचय पाउँ’ बोलको गीतको भिडियोमा नायिका पवित्रा आचार्यसँग नायक गजित विष्टले ठुम्का लगाएका छन् भने सलोन बस्नेत र अशिष्मा नकर्मी पनि फिचरिङ छन् । लोक लयको गीतमा अञ्जु पन्त र रामचन्द्र काफ्लेको स्वर, अर्जुन पोखरेलको संगीत र दिग्गज धुरालीको शब्द सुन्न सकिन्छ । गीतको कोरियोग्राफर पवित्रा आफै हुन् ।
गीत सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै फिल्मका प्रस्तुतकर्ता हरी पन्तले ’मेला’ राम्रो फिल्म बनाएको बताए । यस्तै, फिल्मका निर्देशक बसन्त निरौलाले भने, ’मैंले निर्देशन गरेका अघिल्ला फिल्म भन्दा ’मेला’ भिन्न छ । आश छ दर्शकहरुले फिल्मलाई मन पराउनुहुन्छ । फिल्म हेरिरहँदा दर्शकलाई कत्ति पनि बोर लाग्दैन ।’
मनोज के मरोडिया फिल्मका निर्माता हुन् । फिल्ममा अष्ट महर्जनको द्धन्द्ध, दिव्य सुवेदीको छायाँकन, हरी पन्तको स्टोरी, स्क्रिन प्ले र डाइलग रहेको छ ।
मोडलिङ प्रस्पिर्धा हुने
‘कौन बनेका करोडपति’ होस्ट गरेको कति पारिश्रमिक लिन्छन् अमिताभ बच्चन ?
के नेपाल आउँदैछिन् कट्रीना ?
स्टार हुँदैमा फिल्म हिट हुन्न ः आलिया भट्ट
‘यति चाँडै मर्न दिन्छु म, हिसाब किताब नबुझाई ? ( ‘जात्रै जात्रा’ टिजर रिलिज )
राउटेलाई राहत वितरणमा मनपरी कसले के–के दिन्छन् ? कुनै लेखाजोखा छैन